Dood ku saabsan sida ay Soomaalidu ugu kala qaybsan tahay faafinta xogaha Soomaalida corona ugu dhimatay Sweden (Dhegeyso) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Dood ku saabsan sida ay Soomaalidu ugu kala qaybsan tahay faafinta xogaha...
Dood ku saabsan sida ay Soomaalidu ugu kala qaybsan tahay faafinta xogaha Soomaalida corona ugu dhimatay Sweden (Dhegeyso)
(Stockholm) 25 Maarso 2020 – Ugu yaraan 6 ka mid ah 15 qof oo caabuqa corona ugu dhintay Stockholm ayaa Soomaali ah, sida ay sheegtay Jihaan Maxamed oo ka tirsan Jamciyad ay leedahay Soomaalida Sweden oo uu soo xigtey SVT.
Kooxaha cunsuriga ah ee midigta fog ayaa deeto Soomaalida ku digtey ama wiirsi ka dhigtay, iyagoo Soomaalida ku tilmaamay ”umad dambaysa oo aan wax nidaam ah lahayn.”
Soomaalida ayaa aad ugu kala qaybsan warkan saxaafadda la siiyey oo ay qaar badani qabaan in aanu xumaan mooyaane wanaag usoo jiidin Soomaalida, halka ay qaar ku doodayaan inay arrintani indhaha u furayso Soomaalida oo ku baraarugaysa halista jirta.
Haddaba, waxaa dood arrintaa ku saabsan wadaagaya Yaasiin Cabdullaahi oo macallin iyo Hoodo Aadan oo ah ardayad, waxaana doodda qaybinaya Maxamed Xaaji.
Previous articleArag sida ay dalal Carbeed u dhabar jebiyeen qaddiyadda Soomaaliwayn
Next articleWalaac laga muujiyey Somaliland oo balanbalo ku karaantiishay dad looga shakisan yahay caabuqa corona + Sawirro